Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Webka - Adeegga Caafimaadka Bulshada ee Inc.
Bayaanka Asturnaanta Webka
Community Health Service Inc. (CHSI) waxaa ka go'an ilaalinta asturnaanta kuwa booqda degelkeena. Bayaanka Asturnaanta wuxuu sharxayaa sida aan ula macaamilno macluumaadka laga helo dadka soo booqda degelkeenna.
Adeegsiga degelkani wuxuu muujinayaa inaad fahantay oo aad oggoshahay in lagugu xidho Bayaanka Asturnaanta. CHSI waxay xaq u leedahay inay wax ka beddesho Bayaanka Asturnaanta, gebi ahaanba ama qayb ahaan wakhti kasta. Isbedelada ayaa wax ku ool noqon doona marka la soo dhejiyo degelkan. Isticmaalkaada sii socota ee websaydhada 'CHSI' wixii ka dambeeya isbeddel kasta oo lagu sameeyo Qoraalka Asturnaanta waxay muujineysaa inaad ogolaatay inaad ku xirnaato isbeddelkaas.
Uruurinta iyo Adeegsiga Macluumaadka
CHSI waa mulkiilaha kaliya ee macluumaadka laga soo ururiyey degelkiisa. CHSI ganacsi ahaan kama iibiso liisaska macaamiisha ama cinwaannada emaylka.
Kama ururinayno macluumaadka shakhsiyan lagu aqoonsan karo websaydhka illaa adeegsade degelku si iskood ah u bixiyo iyada oo qayb ka ah codsi adeeg ama macluumaad ah. Xaaladahaas, macluumaadka shaqsiyeed ee la aqoonsan karo waxaa loo isticmaali doonaa oo keliya in lagu fuliyo adeegga la codsaday ama lagu bixiyo macluumaadka la codsaday, marka laga reebo in mararka dhifka ah, CHSI ay la xiriiri karto isticmaaleyaasha diiwaangashan ee degellada emayl si ay wax uga weydiiso xiisaha suurtagalka ah ee adeegyada cusub ee shabakadda.
Waxaan sidoo kale ku soo qaadan karnaa xogta dadka ee aan la aqoonsan karin dadka isticmaala webkeena si aan u hagaajino goobta oo aan u xoojino adeegyada. Isbedeladaan noocan ah lama ogaan doono macluumaadka shaqsi ee isticmaale webka shaqsiyeed.
CHSI waxay soo bandhigi kartaa macluumaadka shakhsiga ah haddii loo oggol yahay ama looga baahan yahay inay sidaa ku sameyso sharci ahaan, ama marka ay sidaas sameyneyso ay ku saleysan tahay aaminaad-aaminnimo in tallaabadaas ay lagama maarmaan tahay in la waafajiyo amar maxkamadeed ama habraac sharciyeed looga adeego CHSI.
Kukiyada waa faylal yar yar oo la dhigo websaydhka isticmaaleha kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka oo loo isticmaalo in lagu kala sooco booqde kasta oo degel ah. Uma adeegsano cookies si aan ula socono macluumaadka shakhsi ahaan lagu aqoonsan karo ee ku saabsan isticmaaleyaasha websaydhka, mana u isticmaalno cookies si aan uga soo ceshano macluumaadka kombuyuutarkaaga oo aan markii hore lagu soo darin cookie. In kasta oo adeegsiga buskudku uu yahay dhaqan caadi ah oo ka dhex socda websaydhada, haddana isticmaalehu wuu karayaa, iyadoo ku xidhan awoodda kumbuyuutarkiisa ama ayada, diidi karo isticmaalka cookies-ka oo uu wali adeegsan karo degelkeenna. Marka laga reebo sida lagu sharaxay Qoraalkan Asturnaanta, uma adeegsaneyno macluumaadka loo soo mariyey cookies-ka wixii ujeeddooyin ah ee xayeysiin ama suuqgeyn ah, sidoo kale macluumaadkaas lama wadaagayo dhinacyada saddexaad marka laga reebo marka dhinacyadaas saddexaad ay u qabanayaan adeegyada CHSI.
Sida malaayiin milkiilayaasha kale ee websaydhka ah, waxaan u isticmaalnaa Google Analytics barta chsiclinics.org
Google Analytics waa qayb ka mid ah softiweer oo xog ka qaadaya booqdeyaashayada (adigu). Waa wax u eg log server sare.
Muxuu diiwaan geliyaa Google Analytics?
Waa maxay degelka aad ka timid si aad halkan u hesho.
Intee in le'eg ayaad joogi doontaa.
Kumbuyuutar noocee ah ayaad isticmaaleysaa
Iyo xoogaa ka badan.
Maxaan ku sameynaa xogtaada?
Macluumaadka raadraaca wuxuu noo ogolaanayaa inaan si fiican u fahanno nooca dadka yimaada boggeena iyo waxyaabaha ay akhrinayaan. Tani waxay noo oggolaaneysaa inaan gaarno go'aanno wanaagsan oo ku saabsan sida loo soo bandhigo macluumaadka macaamiisheena sida ugu wax ku oolsan.
Mararka qaarkood, waxaan ururin doonnaa tirakoobyada guud ee ku saabsan tirada booqdayaasha boggan ay helaan iyo daalacayaasha la adeegsado. Majiro xog shaqsiyadeed oo lagu garto laguma daro warbixinta noocaan ah.
Hawlaheena oo dhami waxay ku dhacaan xuduudaha Shuruudaha Adeegyada ee Google Analytics.
Marabtaa inaad ka baxdo raadinta?
Waxaad awoodi kartaa ka bax cookie-ka raadinta xayeysiiska Google or isticmaal qalab-furaha biraawsarka si aad uga baxdo dhammaan barnaamijyada raadraaca Google Analytics.
Xiriirinta Shabakadaha Webka Saddexaad
Websaydhka CHSI waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaal degello kale (Goobaha Kale). Bayaanka Asturnaanta wuxuu kaliya khuseeyaa degelkeena. CHSI mas'uul kama aha siyaasadaha asturnaanta ama dhaqamada Goobaha Kale. Waxaan ku dhiirrigelinaynaa isticmaaleyaasheena inay ka warqabaan markay ka baxayaan boggayaga oo ay akhriyaan bayaannada asturnaanta ee Goobaha kale si loo go'aamiyo haddii ay aruurin karaan iyo / ama haddii kale ay u isticmaali karaan macluumaad shaqsiyeed lagu garan karo.
Waxaan ku dadaalnaa bixinta macluumaadkaaga gudbinta ee kombuyuutarkaaga oo ku socda shabakadeena internetka. Macluumaadka shaqsiyadeed ee ay soo ururiyeen websaydhada CHSI waxaa lagu keydiyaa jawi hawlgal amni oo aan dadweynaha laga heli karin. Kaliya shaqaalaha u baahan helitaanka macluumaadkaaga si ay shaqooyinkooda u qabsadaan ayaa loo oggol yahay galaangal, mid walbana wuxuu saxiixay heshiis qarsoodi ah.
Waxaan si joogto ah isugu dayeynaa inaanu horumarino bartayada. Waxaan rabnaa adiga iyo qoyskaaga inaad ku kalsoonaataan adeegsiga degelkan adeeg ahaan. Waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad nagala soo xiriirto (218) 236-6502 ama 1 (800) 842-8693 wixii su'aalo ama soo-jeedin ah ee ku saabsan hagaajinta degelkeenna si aan mustaqbalka si fiican kuugu adeegno.